Apple vhidhiyo pamaitiro ekushandisa yako nyowani Apple Tarisa | Ndinobva mac
Apple vhidhiyo pamaitiro ekushandisa yako nyowani Apple Watch
Apple ichangoburitsa vhidhiyo / dzidziso pane zvinoshandiswa kana mashandiro eApple Watch. Vhidhiyo iyi ndeye yakaitwa neiyo itsva Apple Watch Series 6 uye SE, asi zviri pachena kuti inoshanda kune chero modhi yeApple Watch sezvo mashandiro akafanana mune zvese.
MuCupertino unoziva kwazvo kuti yako smart wachi iri kusvika kuvanhu vazhinji uye ndosaka vachida ratidza nenzira yakapfava uye yakajeka yemamwe mabasa ainayo kune avo vachangoiwana. Zviripachena, vamwe veavo vanga vatove nayo kwenguva yakareba vanogona kutarisa vhidhiyo uye pamwe vodzidza rimwe basa ravakange vasingazive.
Vhidhiyo nyowani iri pane iyo Apple Tsigira YouTube chiteshi uye iri muChirungu, asi nekuratidza matanho nenzira yakareruka, zvinonzwisisika kune vazhinji vashandisi. Iyi ndiyo vhidhiyo:
Zvinoita sekunge kutengesa kweApple wachi kuchakura gore rino uye yanga ichityora zvinyorwa kwemwedzi yakati wandei. Pasina kupokana, iyo modhi nyowani iri nani pane yapfuura Series 5 uye Series 4, asi kune avo vanoda kuwana iyo Apple smart wachi uye havadi kushandisa mari yakawandisa pakutenga kwayo kana kungoda izvo zvese zvitsva mabasa ayo aya Series anounza 6, anogona sarudza kutenga iyo Watch SE kana zvakananga iya yechizvarwa chakapfuura.
Kusvikira nhasi ndiri anofara Apple Watch Series 4 mushandisi uye inoshanda zvakakwana pane izvo zvandinoda. Zviripachena kuti iyo Series 5 uye iyo nyowani Series 6 iri pamusoro pane yangu mukuita asi parizvino inoshanda chaizvo uye ini handina chikonzero chekuchinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple vhidhiyo pamaitiro ekushandisa yako nyowani Apple Watch
Kana iyo Solo Loop ikasakwanira iwe, hauchade kudzosera iyo Apple Watch yese.
Apple Inoburitsa macOS Catalina 10.15.7 kugadzirisa 27-Inch iMac Graphics Nyaya